राजनीतिका किरण, साहित्यका चैतन्य
मोहन वैद्य ‘किरण’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव हुन् । हिजोआज उनी राजनीतिमा कम तर अध्ययन र लेखनमा बढी सक्रिय छन् । वैद्य एक सौन्दर्य चिन्तक एवं साहित्यकार पनि हुन् । उनले खण्डकाव्यदेखि निबन्ध, राजनीति र दर्शनसम्बन्धी एक दर्जन पुस्तक लेखेका छन् ।
साहित्य, दर्शन र संस्कृतिका अध्येता वैद्यका प्रकाशित कृतिमा ‘लाहुरेको रहर’ (खण्डकाव्य), ‘मार्क्सवादी कलादृष्टि र समीक्षा’, ‘संघर्षको दर्शन’, ‘क्रान्ति र सौन्दर्य’ छन् । यसैगरी ‘नेपाली समाज र संस्कृतिः एक संक्षिप्त अध्ययन’, ‘समीक्षा र सौन्दर्य’, ‘मार्क्सवाद र संस्कृति’, ‘मार्क्सवादी दर्शन’, ‘क्रान्ति र सिद्धान्त’, ‘मार्क्सवादी सौन्दर्य चिन्तन’ पनि उनैले लेखेका हुन् । उनको पछिल्लो कृति हो ‘हिमाली दर्शन’, जसमा लेखक वैद्यले ऐतिहासिक चिन्तनको फेहरिस्त पस्केका छन् ।
सशस्त्र युद्धताका राखिएको उनको उपनाम ‘किरण’ हो भने साहित्यमा वैद्यले आफूलाई ‘चैतन्य’ भनेर चिनाएका छन् । किरण अर्थात् ज्योति, कान्ति, तेज । चैतन्य अर्थात् चित्शक्ति, चेतनशील ।
उपनामअनुसार राजनीतिमा ‘किरण’को छाप मधुरै भए पनि साहित्य र दर्शनमा ‘चैतन्य’ नाम चम्किलो बनाउन प्रयत्नशील छन् उनी । त्यसैले त किताबमै डुबिरहन्छन्, खाली पानामा कलमकाे टुटी डुलाइरहन्छन् । गोंगबुस्थित उनको घर सानोतिनो ‘लाइब्रेरी’ नै हो । उनको औपचारिक शिक्षा नेपाली साहित्यमा एमए, संस्कृतमा शास्त्री हो । मार्क्सवादी सौन्दर्य चिन्तन वैद्यको रूचिको विषय हो ।
१५ साउन २००३ मा प्युठानको खैरामा जन्मिएका वैद्य सामान्तवादी सामाजिक परिवेशमा हुर्किए । निम्न मध्यम वर्गीय किसानको संयुक्त ब्राह्मण परिवारको जेठो नाति थिए उनी । बुबा संस्कृतका शिक्षक भएकाले वैद्यले सानैदेखि संस्कृत नै अध्ययन गरे । उनको परिवारले गोर्खा परिषद्लाई मन पराउँथ्यो । ‘२००७ सालको आन्दोलनपछि उदाएका कांग्रेस र कम्युनिस्टभन्दा मेरा बुबा गोर्खा परिषद्लाई अलिक धार्मिक स्वभावको ठान्नुहुन्थ्यो’, वैद्य सम्झिन्छन्, ‘परिवारले नै रुचाएकाले मलाई पनि गोर्खा परिषद् राम्रै लाग्थ्यो ।’
पढ्न भनेर दाङ पुगेपछि उनमा राजनीतिक चेतना विस्तार भयो । यसपछि उनी बदलिँदै गए । साहित्यकै विद्यार्थी भएकाले उनले रचनाहरू गर्न थाले । ‘साहित्यप्रति मेरो लगाव युवावस्थादेखि नै रह्यो, सुरुमा कविता र निबन्ध लेखेँ’, उनी भन्छन् ।
विद्यार्थीकालमा उनी दाङको सामान्तवादी प्रवृत्तिसँग साक्षात् भए । ‘त्यहीँबाट सामान्तवादप्रति घृणा बढ्दै गयो’, वैद्य भन्छन्, ‘त्यसपछि दाङको विद्यार्थी आन्दोलनमा विस्तारै सक्रिय हुँदै गएँ ।’ विद्यार्थी आन्दोलनकै क्रममा उनले कम्युनिस्ट दर्शन र सिद्धान्तबारे अध्ययन गरे, धेरै कुरा बुझ्दै गए । दाङका लोकमणि आचार्य र नारायण आचार्यले सुरुका दिनमा उनलाई कम्युनिस्ट सिद्धान्त सिकाएका थिए ।
२००७ सालपछि प्रगतिशील साहित्य आन्दोलनको प्रभाव बढ्दै थियो । उनलाई त्यसले पनि प्रभावित गरेको थियो । त्यसैले अध्ययनसँगै उनी साहित्य लेखनमा पनि अघि बढे । युवा अवस्थामा आफूले कवितामार्फत सामन्तवादी प्रवृत्तिविरुद्धको आक्रोश पोख्ने गरेको उनी सम्झन्छन् ।
२०२० सालपछि उनका कविता र निबन्धहरू प्रकाशित भए । २०२८ सालमा दाङबाट प्रकाशित हुने सन्देश नामक पत्रिकामा उनको पहिलो समालोचना छापिएको थियो । वैद्यले व्यवस्थित ढंगले लेख्न थालेको ३० को दशकबाट हो । उनी भन्छन्, ‘जनसाहित्य, हल्कारा, गोसाजलगायतमा लेख्दै आइयो । कविता इत्यादि फाट्टफुट्ट लेखेँ । २०३७ सालमा लाहुरेको रहर खण्डकाव्य लेखेँ । कथाहरू पनि लेखेँ । पछि समालोचना र सौन्दर्य चिन्तनमा बढी लेखियो ।’
‘क्रान्तिको राजनीतिमा होमिएको तपाईं साहित्यतिर चाहिँ कसरी आइपुग्नुभयो त ?’
जवाफमा उनी भन्छन्, ‘म साहित्यकै विद्यार्थी थिएँ । यसमा मेरो विशेष रुचि थियो । अर्को कुरा, राजनीति गर्ने मानिसले साहित्य लेख्न हुँदैन भन्ने मान्यता म राख्दिनँ । बीपी कोइरालाले पनि त राजनीति र साहित्यलाई समानान्तर ढंगले अघि बढाउनुभएको थियो ।’
राजनीतिमा लागेपछि नै वैद्यले साहित्य लेखन थालेका हुन् । ‘त्यसअघि अध्ययन गरिन्थ्यो तर लेखिँदैनथ्यो’, उनी स्मरण गर्छन्, ‘राजनीतिसँगै साहित्यिक पाटोलाई पनि मैले समानान्तर ढंगबाट अघि बढाएँ ।’
पञ्चायत, राजाविरुद्ध संघर्षताका पनि उनले विभिन्न पत्रपत्रिकामा थुप्रै कविता, निबन्ध र समालोचना लेखे । ‘भूमिगत हुँदा त पहिलेभन्दा झन् धेरै लेखेँ । समालोचना बढी लेखेँ’, उनी भन्छन् ।
‘साहित्यका अतिरिक्त स्वायत्तताका हिमायती र कविताको पवित्रताका आग्रहीहरू अक्सर साहित्य र राजनीतिलाई आपसका दुस्मन बताउँछन् । यी दुवै क्षेत्र एकआपसबाट टाढा हुँदा नै राम्रो हुने तर्क गर्छन् । तपाईंले त यी दुई क्षेत्रलाई समानान्तर ढंगले अघि बढाउनुभएको छ, यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ?’
साहित्य र राजनीतिको शैलीमा भिन्नता भए पनि लक्ष्य एउटै भएको वैद्यको जवाफ छ । उनका अनुसार साहित्य र राजनीति मानव जीवनका दुई पाटा हुन्, जो आपसमा परस्पर सम्बन्धित छन् । यी दुवै क्षेत्र सामाजिक मानवीय चेतनाकै रूप भएको उनको बुझाइ छ । राजनीति र साहित्यबीच शैलीमा भिन्नता भए पनि लक्ष्य एउटै हो । ‘साहित्यमा विचारलाई, अनुभूतिमय, बिम्बमय, प्रतीकमय बनाएर प्रस्तुत गरिन्छ, भावना आउँछ’, वैद्य भन्छन्, ‘त्यही विचार राजनीतिमा अलि फरक ढंगले आउँछ । रामायण र महाभारत राजनीति, साहित्य र इतिहास नै त हुन् ।’
‘जहाँसम्म साहित्य र राजनीतिलाई आपसका दुस्मन मान्नेहरूको सवाल छ, बीपी नै यसको जवाफ हुनुहुन्छ । उहाँको नाम राजनीतिमा जति बिक्छ, साहित्यमा त्यति नै प्रख्यात छ ।’
वैद्य मार्क्सवादी सौन्दर्य चिन्तक हुन् । उनी साहित्यले दमन र शोषणविरुद्ध बोल्ने बताउँछन् । श्रम प्रक्रियाबाट नै साहित्य कलाको सृष्टि भएको उनको भनाइ छ । ‘अर्काले श्रम शोषण गरेपछि मान्छे दुःखी र चिन्तित हुन्छ । श्रमिकहरू अघि बढेपछि मात्र मुक्ति मिल्छ ।’ उनका अनुसार साहित्यले यही श्रम सौन्दर्य बोल्छ । र, पीडित श्रमिकलाई समस्याबाट उन्मुक्ति दिलाउन सक्छ ।
दाङबाट विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका उनी त्यहाँबाट प्युठान पुगेका थिए । प्युठानमा पार्टी जिल्ला सेक्रेटरीसम्म बने । त्यस बेला कम्युनिस्ट नेताहरूले सांस्कृतिक रूपान्तरणका अभियान चलाएका थिए । जस्तो कि, बाहुनले हलो जोत्ने अभियान ।
वैद्यले भूमिगत रहेका बेला २०२१ सालमा तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए । २०२९ सालदेखि भने उनी पूर्णकालीन कार्यकर्ता भए । २०३१ सालमा तेस्रो महाधिवेशनपछि मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको पार्टीमा वैद्य केन्द्रीय सदस्य बने । उनलाई पार्टीले पश्चिम ब्यूरोको सदस्य बनाएको थियो । तर, लगत्तै निर्माण भएको कोके र नेकपा मालेका कार्यक्रमहरूबाट वैद्यसहितका नेता प्रभावित थिए । २०३४ सालबाट उनी भूमिगत भए ।
‘त्यस बेलासम्म पनि मोहनविक्रमजीलाई हामी आदर्श नै ठान्थ्यौं’, वैद्य स्मरण गर्छन्, ‘तर, विस्तारै उहाँमा सांस्कृतिक विचलन आउँदै गयो । पछि पार्टीले उहाँलाई कारबाही पनि गर्‍यो । २०४१ सालको महाधिवेशनले मलाई नेकपा मसालको महामन्त्री बनायो ।’
वैद्य महामन्त्री भएको अर्को साल मोहनविक्रम सिंह छुट्टिएर पातलो मसाल बनाए । पार्टी महामन्त्रीको रूपमा पाँच वर्ष नेतृत्व गरेपछि वैद्यले प्रचण्डलाई पद हस्तान्तरण गरे । ‘त्यस बेलाको सेक्टर काण्ड, प्रतिभाशाली युवालाई नेतृत्व सुम्पनुपर्छ भन्ने मान्यताले मैले पद छाडेको हुँ’, उनी भन्छन्, ‘फेरि, मेरो स्वभाव अलिक अध्ययनशील खालको थियो । र, मूल नेतृत्व बस्दा अध्ययन गर्ने अवसर निकै कम हुने भएकाले पनि मलाई महामन्त्रीमा बसिरहन मन लागेन । अध्ययन र साहित्य लेखनका लागि फुर्सद निकाल्न पनि मैले पद छोड्नुको कारणमध्ये एक थियो ।’
अलग भएर गएका मोहनविक्रम सिंहको पार्टीमा विद्रोह गरेर आएका डा. बाबुराम भट्टराईहरूसँग पार्टी एकताको प्रक्रिया अघि बढाइयो । एकता महाधिवेशनले पार्टीलाई ‘सशस्त्र जनयुद्ध’मा लैजाने निर्णय गरेको थियो । ‘तैपनि २०४८ सालको आमचुनावलाई जनयुद्धकै एउटा मोर्चाको तयारीस्वरूप लिने भन्ने भयो’, वैद्य भन्छन्, ‘उक्त निर्वाचनमा हामीले नौ सिट जित्यौँ । २०५२ सालबाट जनयुद्ध सुरू भयो ।’
कहिलेकाहीँ सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिनुबाहेक मोहन वैद्य हिजोआज घरमै अध्ययन र लेखनमा व्यस्त हुने गरेका छन् । अहिले उनको पार्टी सानो छ । यद्यपि, उमेरले ७४ वर्ष पुगिसकेका वैद्यमा क्रान्तिको सपना ज्युँदै छ । राणाकाल, पञ्चायत, शाहवंश हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको अनुभव गरेका उनले नेपालमा जनवादी क्रान्ति गर्ने आँट अझै मारेका छैनन् । कृतिहरूमार्फत अझै उनी नौलो जनवादी क्रान्तिको अभिलाषा प्रकट गर्छन् ।
त्यसो त प्रचण्डलगायत नेतालाई सारसंग्रहवादी भन्ने वैद्य स्वयंलाई जडसूत्रीय–संशोधनवादी (मुखले क्रान्तिकारी तर व्यवहारमा यथास्थितिवादी) काे आक्षेप लाग्ने नगरेको हाेइन । तैपनि, वैज्ञानिक समाजवादसम्म पुग्ने उनको राजनीतिक उद्देश्य जीवितै छ ।
भन्छन्, ‘क्रान्ति कुनै एउटा पुस्ता वा युगमै सम्पन्न हुँदैन, युगौँ चल्ने प्रक्रिया हो । त्यसैले नयाँ पुस्ताका साथीहरू क्रान्तिलाई निरन्तरता दिन तम्तयार हुनुपर्छ । साम्यवाद र क्रान्ति सपना मात्र नभएर अकाट्य ऐतिहासिक यथार्थ पनि हो ।’
उनी राजनीतिलाई वर्ग संघर्षको घनिभूत अभिव्यक्ति ठान्छन् । समाजमा वर्गीय असमानता, विभेद छ । त्यही असमानताले गर्दा नै समाजमा वर्गीय द्वन्द्व रहेको उनको बुझाइ छ । ‘समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म नपुगुन्जेल यस्तो खाले द्वन्द्व चलि नै रहन्छ, रहनुपर्छ । क्रान्तिको ज्योति जगमगाएर साम्यवादको सपनालाई नजिक्याउनुपर्छ । यसका लागि हुने द्वन्द्व नै क्रान्ति हाे’, वैद्य भन्छन् ।
द्वन्द्वकालमा नेकपा माओवादीका नेतालाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलले जारी गरेकाे रेड कर्नर नोटिसमा मोहन वैद्यको नाम मोहन पोखरेल ‘वैद्य’, पार्टीभित्रको नाम ‘किरण’ र ‘अगम’ उल्लेख गरिएको थियो । पार्टीभित्र उनलाई अक्सर ‘किरण’ उपनामले नै चिनिन्थ्यो ।
रुसी क्रान्तिताकै कम्युनिस्ट नेताले उपनाम राख्न थालेका हुन् । रुसी क्रान्तिका नायक मानिने भ्लादिमिर इलिइच उल्यानोव संसारभर ‘लेनिन’का रूपमा चर्चित बने । अर्का नेता आयोसिफ भिसारिनोभी झगासिभिली, अरु कोही नभएर ‘स्टालिन’ नै हुन् । कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेपछि जात, धर्म त्यागेर मानव जाति मात्रै हुँ भन्ने देखाउन उपनाम राख्ने चलन छ । यसबाहेक युद्धकालमा आफ्नो परिचय छुपाउन पनि उपनाम राखिन्थ्यो । सशस्त्र युद्धका बेला राखिएका सबै माओवादी नेताका उपनाम अहिले पनि चर्चित छन् । तिनैमध्ये एक नाम हो, किरण । ‘शान्ति प्रक्रियामा आएपछि झन् धेरैले किरणकै रूपमा चिन्न थाले’, वैद्य भन्छन् ।
साहित्यमा पनि उपनाम राख्ने चलन पुरानै हो । महाकाव्यकार मोदनाथ पौडेल ‘पश्रित’ का रूपमा चर्चित छन्, वरिष्ठ साहित्यकार श्यामप्रसाद शर्मा ‘सेवक’ भए, गायक गणेश राईलाई धेरैले ‘गणेश रसिक’ भन्छन् । गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रिय गान ‘सयौँ थुंगा’ का रचयिता प्रदीपकुमार राई ‘व्याकुल माइला’का रूपमा चिनिए । ‘बैरागी काइँला’ भनेका नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति तिलविक्रम नेम्वाङ हुन् ।
यसरी नै वैद्यले चैतन्य नाम रोजे । किन ?
उनी भन्छन्, ‘भूमिगत हुँदा आफ्नो वास्तविक परिचय छुपाउनुपर्थ्यो । पार्टीभित्र सबैले किरण भनेर चिन्थे । राजनीतिक लेखहरू किरणकै नामबाट लेख्थेँ । तर कथा, कविता, निबन्धमा म चैतन्य नाम राख्थेँ । यो नाम मलाई राम्रो लागेकाले रोजेको हुँ । चैतन्य नामबाट नै निबन्ध, कविता, कथाहरू लेख्थेँ ।’
चैतन्य नामबाटै उनले कृष्णमणि साहित्यिक पुरस्कार २०५५, गोकुल साहित्यिक पुरस्कार २०६५, पारिजात सृजन सम्मान २०६९, प्रगतशील लेखक संघ सम्मान २०६९ लगायत पुरस्कार तथा सम्मान प्राप्त गरिसकेका छन् ।
म थाकेको छैन
आगामी दिनमा पनि राजनीति र साहित्यलाई सँगसँगै अघि बढाउने योजना उनले सुनाए । ‘समाजवाद, सामाजिक जीवन, रूपान्तरणको प्रक्रियामा राजनीति र साहित्यलाई सँगसँगै अघि बढाउन प्रयत्नशील रहनेछु’, वैद्यले कुराकानीकाे बिट मारे ।
अमर न्याैपानेः भाेटाहिटीका कृष्ण मानन्धरसँग अमर न्यौपानेले सिकेकाे चित्रकला
विश्वप्रकाश शर्माः महामारीमा विश्वप्रकाशको गीत : साथ रहौँ, सचेत बनौँ
भीमार्जुन आचार्यः भीमार्जुनकाे वकालत, अर्जुन मिलनकाे गीत
धिरज राई नक्सा काेर्ने गायक
राजेश केसीः कफी, संगीत र कार्टुन : अर्थात् फलानाे
प्रल्हाद गिरीः जागिर एकातिर, रुचि धेरैतिर
घनश्यामराज राजकर्णिकारः ‘पाउरोटी बा’का साहित्यकार छोरा
केशव विष्टः कला सपना, खेलकुद 'प्यासन'
शिवहरि पाैड्यालः ‘प्वाक्क मुखाँ’ हान्नु जस्तो
प्रदीपकुमार ज्ञवालीः राजनीति र साहित्यमा सँगसँगै
गणेशदेव पन्तः रिलका निर्देशक, रियलका चियावाला
कमल थापाः राजनीतिमा चतुर, खेलमा कुशल
दिनानाथ शर्माः सिर्जनाको छहारीमा रमाइरहेका राजनीतिज्ञ
रेखा थापाः राजनीतिमा रेखा
केशव झाः गीत-सङ्गीतमा रमाएका नेता
झलनाथ खनालः झलनाथका फरक झलक
काेमल ओलीः अविवाहिता कोमलका पाँचौँ प्रेमी
भाेला रिजालः भोलाकाे कला
शाेभिता सिम्खडाः रङ्गीन संसारबाट साहित्य सागरमा सोबिता
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर १३, २०७७, ०८:००:००